Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo (QBO) Magaalaa Finfinnee Irraa Kenname. |
Home Afaan Oromoo Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo (QBO) Magaalaa Finfinnee Irraa Kenname.
SQ | Hagayya 21, 2020
Haala Dhaabbileen Siyaasaa, Uummanni Oromoo fi Biyyi Keenya Keessa Jirtu Irratti Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaala Finfinnee.
Akkuma beekamu Qeerroon Bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti qabsoo Bilisummaa Oromoo kallachummaa Adda Bilisummaa Oromootiin hogganamu jalatti hiriiruun qabsoo Oromoo mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa bahataa har’a gaheera.
Sirni mootummaa abbaa irree jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif Qeerroo/Qarree, beektota, haayyoota, qabsaa’ota haqaa, akkasumas ilmaan Oromoo hawaasicha biratti dhageettii qaban hidhaa, ukkaamsaa, ajjeesaa fi achi buutee isaanii dhabamsiisaa har’a ga’uun isaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoo biratti gochaan kun gocha gara jabeenyaa sirni kun sabboonummaa Oromoo jaamsee eenyummaa saba keenyaa awwaaluuf carraaqu ta’uu isaati.
Har’as hayyootaa fi qaroo Oromoo irratti diraamaa diigumsaa hojjechuun itti fufee jira. Sirni hawaasicha cunqursuu fi hacuucu kun yeroo garaagaraatti saba Oromoo xiqqeessuu fi hadheessuu irratti xiyyeeffatee hojjeta.
Sirni kanaan dura sabboontota ilmaan Oromoo dararaa fi ajjeesaa ture sun har’as kan duraaniirra caalaa itti fufee jira.
Bu’uuruma kanaan, Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaala Finfinnee marii yeroo garaagaraatti taasiseen murtoolee armaan gadii dabarsee jira:
1. Mootummaan maqaa Ol-aantummaa Seeraa hojiiirra oolchuu jedhuun namoota mana hidhaatti guuraa jiru hatattamaan dhaabuu qaba.
2. Hidhamtoota maqaa siyaasaan yakkee hidhes haalduree tokko malee hatattamaan akka gadhiisu gaafanna.
3. Doorsisni fi shirri diigumsaa qaamolee mootummaan/tika mootummaa, poolisotaa fi abbootii aangoon hogganoota, qondaalotaa fi miseensota paartilee siyaasaa Oromoo kamirrattuu gaggeessu dhaabuu qaba.
4. Hidhaa fi doorsifni gaazexeessitoota miidiyaalee sagalee uummataa ta’an kan akka ONN, OMN fi OBS irratti godhamaa turee fi itti jiru akka irraa dhaabbatu gaafanna!
5. Mirgaa fi Hiree Murteeffannaa Uummata Oromoo dura dhaabbachuun roorroo qe’ee fi ilmaan oromoo irratti raawwachuun akka dhaabbatu cimfinee gaafanna.
6. Ajjeechaa qaamoleen nageenyaa mootummaa raawwataniif gaafatamaan mootummaa waan ta’eef fuula durattis lammiilee nagaa ajjeesuu irraa akka of qusatu gaafanna.
7. Mootummaa fi qaamni nageenya eegsisna ofiin jedhu waajjiraalee paartilee siyaasaa Oromoo cufsiisuu fi ugguruu irraa of qusachuu akka qaban dhaamna.
8. Qaamni mootummaa kamuu maqa balleessii fi burjaajjii saba Oromoo gidduutti uumuun gurmuun tokkummaa saba keenyaa akka laaffatu hojjechuu irraa hatattamaan akka dhaabbatu gaafanna.
9. Mootummaan hogganoota paartilee siyaasa Oromoo kanneen akka ABO fi KFO manatti ugguree; hedduu isaanii yakka tokko malee hidhee dararuun dhaabota uummata Oromoo birattii fudhatamummaa fi jaalala qaban shiraan diiguuf tattaaffiin godhaa jiru kan hin milkoofneef ta’uu hubatee akka irraa of qusatu cimsinee gaafanna.
10. Walgahiin maqaa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromootiin Adoolessa 26 fi 27/2020 waajjira muummee dhaabaatti geggeeffame Heera, Seeraa fi Caasaa dhaabichaa waan hin eegneef kan bakka nun buune ta’uusaa ibsuu barbaanna.
Bu’uuruma kanaan, Koreen Naamusaa fi To’annoo(KNT) dhaabichaa rakkoo fi dogongora mudate kana qoratee ifa gochuun murtoon madaalawaan qaama hoggana dhaabaa dhimmi ilaallatuun fudhatamee miseensota, deeggartootaa fi dinqisiifattootasaa dhaabichaaf ibsi akka kennamu jabeessinee gaafanna.
11. Namoonni maqaa dhaabbilee siyaasa Oromoo dawoo godhatanii dhaaba ilmaan Oromoo wareegama lubbuu jijjiirraa hin qabne itti baasan diiguuf diina waliin hojjetan haal-duree tokko malee gocha farrummaa dalagaa jiran irraa akka of qusatan cimsinee gaafachaa; dhaabonni kunis namoota gocha akkasii irratti hirmaatan irratti tarkaanfii madaalawaa akka fudhan gaafanna.
12. Weerarri lafaa maqaa lafa jireenyaa qooduu jedhuun lafa Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti seeraan ala raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu jabeessinee gaafanna.
Qeerroowwan Oromoo faayidaa dhuunfaaf jettanii saba keessan irratti shira hamaa dalagaa jirtan hatattamaan gocha akkasii irraa akka dhaabbattan Qeerroon Bilisummaa Oromoo cimsee isin beeksisa.
Waamicha Dhaabota Siyaasa Oromoof:
Dhaabotni siyaasaa Oromoo dantaa uummata keenyaa tiksuuf dhaabattan hundi ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo kana akka deeggartan waamicha isiniif dhiyeessina. Qeerroon Bilisummaa Oromoo abdii Oromoo fi oromiyaa; akkasumas abdii saboota hundaati. Kanaafuu, garaagarummaan ilaalchaa qabdan utuu isin hin daangessin imala qabsoo Oromootti xumura gochuu irratti akka nu waliin dhaabbattan cimsinee gaafanna. Dhaabonni Siyaasaa Oromoo garaagarummaa ilaalchaa isin gidduu jiru dhiphisuun rakkoo uummata keenyaa furuuf jecha Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin dhaabbattanii aarsaa barbaachisu kaffaluun falma hadhooftuu akka gaggeessinu jabeessinee dhaammanna. Uummata keessan waliin taatanii gaaffii uummata keenyaa galmaan gahuu fi boru uummata Bilisummaatti jiraatu arguuf Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin hariiroo jabaa uummachuun akka hojjettan waamicha keenya dabarsina.
Waamicha Hawaasa Oromoo Biyya Keessaa fi Alaaf:
Gochi gara-jabeenyaa amma mootummaan uummata keenyaa fi sabboontota irraan gahaa jiru daraan hammaataa waan jiruuf:
Tokkummaa dhugaan kaayyoo jaallan itti wareegamanii har’aan ga’an galmaan gahuuf waliin hojjechuu fi tumsa qabsoon gaafatu akka taasiftan cimsinee gaafanna.
Abbootiin Qabeenyaa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtaniif:
Qabeenyaa qabdaniin qabsoo Oromoo tumsuun Mirga Hiree Murteeffannaa saba keenyaa fiixaan baasuu keessatti qooda keessan akka baatan waamicha isiif goona. Beektonnii fi Namoonni Ogummaa garaagaraa qabdan gita isin ilaallatu hundaan hawaasa keessan cinaa dhaabbachuun akka deggartan jabeessinee gaafanna.
Ilmaan Oromoo caasaalee Mootummaa garaagaraa keessa hojjettan hundi kaayyoo fi akeeka haadhaa fi abbaa Keessanii yaadachuun Saba keessan tumsuun QBO cina dhaabbachuun sirna garboomfataa kanatti xumura akka gootan waamicha isiniif goona.
Walumaa galatti, mootummaan waan jedhame kana hatattamaan hojiiirra oolchuu baannaan rakkoo deddeebi’ee mul’atuuf itti gaafatamaan mootummaa ta’uu cimsinee hubachiifna!
Gumaa Isa Kufee, Isa Jirutu Baasa!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee
224You, Bayissa Gerbi, Maammee Caffee and 221 others
Previous articleQeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement?
Next articleSQBO: Obbo Jamaal Ganamooo haala yeroo fi adeemsa QBO irratti
Gashaw August 24, 2020 At 3:24 am
Shimlese Abdissa is training Liyu Hayil INSA spies who are chosen to infiltrate Queerroo inorder to sabotage Queerroo from within.